Usalelwe yizinyathelo ezingu-3 ukuba udlulele kokulandelayo
Qala ngokuhlola Izindawo Zokuhlala noma Okokuzithokozisa. Faka izihlungi ezinjengamakhaya aphelele, ukuzingenela, noma izilwane ezifuywayo ezivunyelwe ukuze uhlunge lokho okufunayo. Ungagcina nezinto ozithandayo ohlwini lwezinto ozifiselayo.
Uma usukutholile lokho okufunayo, funda ngombungazi wakho, ufunde ukuphawula kwangaphambili kwezivakashi, futhi uthole imininingwane ngezindlela zokukhansela—bese uyabhukha ngokuchofoza kabili kathathu.
Usukulungele! Xhumana nombungazi wakho nge-app ukuze uthole amacebiso endawo, imibuzo noma iseluleko. Ungathintana futhi ne-Airbnb noma nini ukuze uthole usizo olwengeziwe.
Nomaphi lapho uya khona, sizokusiza
Impilo nokuphepha kusemqoka
Ababungazi abazibophezela kumaphrothokholi okuhlanza e-COVID-19 athuthukisiwe, futhi izindlu ezifakiwe zinikwa izilinganiso ngenhlanzeko.
Izindlela zokukhansela ezengeziwe
Ababungazi banganikeza izindlela eziningi zokukhansela ezivumelana nezimo ezishiwo ngokucacile lapho ubhukha.
Usizo noma nini, emini noma ebusuku
Ngosizo lwamakhasimende luka-24/7 emhlabeni wonke, sizokusiza noma nini lapho udinga usizo.
Ukulungele ukuqala ukusesha?
Kuyadingeka yini ukuba ngihlangane nombungazi wami?
Izindlela ezinjengokuzingenela noma ukubhukha indlu ephelele kukuvumela ukuba uxhumane nombungazi wakho ngokuyinhloko ngemiyalezo ephakathi kwe-app—ungamthumelela umyalezo noma nini uma kuvela okuthile.
Yini eyenziwa yi-Airbnb nge-COVID-19?
Thola imininingwane yakamuva ngokusabela kwethu ku-COVID-19 nezinsiza zezivakashi, okuhlanganisa izilungiso zezinqubomgomo, imingcele yokuvakasha, izindlela zokuvakasha ezivumelana nezimo, nokunye. Funda kabanzi
Kuthiwani uma kudingeka ngikhansele ngenxa yenkinga ngendlu noma umbungazi?
Ezimweni eziningi, ungaxazulula noma iziphi izinkinga ngokuqondile ngokuthumelela umbungazi wakho umyalezo. Uma engakwazi ukukusiza, vele uthintane ne-Airbnb kungakedluli amahora angu-24 okuthola kwakho inkinga. Funda kabanzi
Ukubhukha ngikukhokhiswa nini?
Uzokhokhiswa masinyane lapho ukubhukha kwakho sekuqinisekisiwe, kodwa siyayibamba inkokhelo eya kumbungazi kwakho kuze kube semahoreni angu-24 ngemva kokuba usungenile ukuze sikunikeze isikhathi sokuqinisekisa ukuthi konke kuyilokho obukulindele. Funda kabanzi
Ngiba kanjani umbungazi?
Cishe noma ubani angaba umbungazi wokuhlala noma okokuzithokozisa. Ukubhalisa nokwabelana ngendawo yakho noma ngamakhono akho nomhlaba kumahhala. Ukuze uqalise, vakashela Isikhungo sethu Sababungazi. Funda kabanzi
Udinga imininingwane eyengeziwe?
Vakashela i-Help Center yethu ukuze uthole izimpendulo ezengeziwe emibuzweni yakho. Funda kabanzi